सिस्टम उही हो, साधनस्रोत त्यही हो, रातारात चमत्कार हुन्छ भन्ने छैन « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
प्रकाशित मिति : २०७९, १० जेष्ठ मंगलवार १५:०४
दलहरूलाई गाली गर्दै अर्को नयाँ दल खोल्नुलाई हामीले वैकल्पिक राजनीति भनेर व्याख्या गर्न खोज्यौँ । तर त्यो राजनीतिको विकल्प नभएर दलको मात्र विकल्प रहेछ । राजनीतिमा विकल्प खोज्ने काम माथिबाट नेताले होइन, जमिनबाट जनताले गर्ने रहेछन् !
बाजागाजासहित, तामझाम, पर्चा र पम्पलेटसहित हामी वैकल्पिक पार्टी भनेर नहुने रहेछ । यो कतिबेला कसरी र कहाँबाट प्रस्फुटन हुन्छ भन्नै नसकिने, कुनै नियमको मूलबाटोमा नहिँड्ने प्रेमको नियमजस्तो ! पात्र छानेर, गर्छु भनेर, अरूको प्रेममा यति खोट छ भन्ने गनेर कहिले प्रेम घटित हुन्थ्यो र !
विवेकशीलका नाममा केही युवाले आम जनताको सोच्ने शैली अलिकति परिवर्तन गरेको पक्का हो, तर सिस्टमलाई धक्का दिन बालेन आइपुगे । पार्टी खोलेर, समाजवाद र पूँजीवादका दर्शन बोकेर र भएका पार्टीलाई धुलो चटाउँछु भनेर आएको भए शायद बालेनलाई काठमाडौँले बाल दिने थिएन । कुनै राजनैतिक दलका समर्थकदेखि भक्तसम्मको मन नदुखाई, दलकै विकल्प बन्छु भन्ने घमण्ड नदेखाई, आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य सजिलो भाषामा बुझाई बालेनले काठमाडौँ जिते ! हर्क साम्पाङ् र गोपी हमालले गरेको कमाल त झनै शानदार रह्यो ।
यसअघिका यस्ता प्रयास विकास र निकासका लागि भन्दा पनि दलहरूको विपक्षमा केन्द्रित भएर होला, जनताले अनुमोदन गरेनन् । दल त नयाँ ल्याउन सकिएला तर कुनै अर्को ग्रहबाट फ्रेस भोटर त ल्याउन सकिन्न । खासमा यसअघि कुनै न कुनै दलमा झुकाव भएका जनताबाटै विकल्प निस्किने हो । दललाई गरेको गाली धेरैथोरै तिनै जनतालाई नै हुने रहेछ । आफूलाई महत्त्व दिनेलाई पो भोट दिनु, गाली गर्नेलाई के भोट दिनु भन्ने तिनलाई लाग्दो हो ।
सिस्टम उही हो, साधनस्रोत त्यही हो । रातारात परिवर्तन या चमत्कार हुन्छ भन्ने छैन । तर पार्टीको मेयरमाथि ठेक्कापट्टादेखि सामान्य जनशक्ति भर्नासम्म देशभरका ठुटे नेताको थेग्नै नसकिने दबाब हुन्छ । राजनैतिक करियरको दाउपेच हुन्छ । कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न नसकिने हुन्छ । तर स्वतन्त्र जित्नेहरूसँग कम्तिमा यस्तो संस्थागत दबाब र झमेला छैन । तिनलाई सुन्दा तिनीहरू दिशाहीन छन् जस्तो पनि लाग्दैन । समस्या बुझेका छन्, निकासको ढोका देखेका छन् र उच्च मनोबल बोकेका छन् । शायद यो परिणामबारे पूर्व आँकलन नभएर होला, गम्भीर रूपमा तिनलाई सुनिएको रहेनछ । आज जति सुन्यो, त्यति मन आश्वस्त हुन्छ ।
तिनको विजयलाई जनताले दल बहिष्कार गरेको अर्थमा लिनु पनि फेरि अर्को गल्ती हुनसक्छ । तिनलाई भोट हाल्नेले बाँकी मत आआफ्नो दललाई दिएका छन् । दलको रूपान्तरण भने सबैले चाहेको जस्तो देखिन्छ । भलै हाम्रा दल कुकुरको पुच्छरजस्ता किन नहून् ।
जित्नेहरूलाई बधाई !
महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षपछि मूल नहरमा पानी
शेरबहादुर सिंह, महेन्द्रनगर । नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले महाकाली
राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा समस्याः कानुनमन्त्री
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक
सम्भवतः आज मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छः माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्भवतः आज मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने